Geoinformatics, daabacaadda 7… GIS iyo waxyaabo badan oo loogu talagalay Hispanics - Geofumadas
Disember, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, tabo cusub, Microstation-Bentley, topografia
Oo hadda ku jira edition siddeedaad oo Macalester Geoinformatics, kaas oo eegaya hab GIS si fudud heerka "cajiib ah" geofumado ah laakiin noo soo jiita in waqtigan ka badan hal article oo ku salaysan waayo-aragnimada laga dalalka Isbanishka ku hadla soo dhowaadaan.
Mid ka mid ah qodobbadan oo ku saabsan habka Hispanic waa mid ku saabsan mashruuca gvSIG, waxaan u maleyneynaa inay tahay guul wacan oo muujinaysa hindisaha ku baxaya canshuurta dadka iyo in la sii wado xawaaraha dardargelinta waxay noqon kartaa qalab aad u fiican oo bilaash ah.
Dabcan, haddii aysan xawaareynin horumarintiisa, waxay sii wadi kartaa qaab-dhismeed dib u eegis by "khubaro ArcGIS shufto" in xaalado badan waa ay saxan yihiin, laakiin inta badan lumin codsiyada indhaha sababtoo ah hindisaha dawladda badanaa u muuqdaan in ay gaabis ah ... ama sababta oo ah waxay naceen opensource ah.
Mid kale oo aan ku faraxsanahay inaan aragno waa Tarjumida godadka Naica, Mexico. Maqaal xiiso leh oo ku saabsan shuruudaha ba'an ee baaritaanka laser ...
Waxay muujineysaa oo kaliya habka loo maro laakiin gabagabada qaar inkasta oo shaqadu aysan wali dhammaan. Waqtiga wanaagsan ee asxaabteena reer Mexico, sawirka daboolka wuxuu ku saabsan yahay qodobkan, wuxuu muujinayaa sida ay tahay inaad u asturto sidii cirbixiyeen si aad u sameyso nooca noocaas ah, waxba kuma laha saaxiibkeen xeebta qaawan, hehe.
3. Khariidadda Web 2.0 ...
Maxuu jahwareerku ka dhigan karnaa shabakada 2.0 ... leh. Hagaag, taasi maahan tarjumaad suugaaneed laakiin waa maqaal isku dayaya inuu sigaar ku cabbo isbedelada internetka ee waxa aan ognahay jiilka 2.0.
Qalinkii Lambert-Jan Koops mawduuca codsiyada websaydhka oo leh aalado khariidado iyo alaabta lagu ciyaaro iyo khadka tooska ah ee GIS ayaa lagu taabtay. Waxa xiisaha lihi, qiijiyuhu wuxuu xusayaa alaabada sida MapGuide (AutoDesk) iyo ProjectWise (Bentley), samaynta xidhiidh xitaa fududaynaya, sida caddaynta sida kuwani u yihiin tusaalooyinka horumarinta teknoolajiyada farshaxanka si loola wadaago fikradaha si loo hagaajiyo sirdoonka wadajirka ah.
Diirinta codsiyada webka waxaa lagu arkaa afar heer, laga bilaabo koorso koorso ah:
Heerka 0. Waa codsiyo ka shaqeeya internetka iyo offline.
Heerka 1. Waa codsiyada ka shaqeeya internetka iyo offline laakiin waxay ka shaqeeyaan shaqeyn badan oo xoog leh iyagoo ku shaqeynaya hab isku xiran.
Heerka 2. Xaaladdan, codsiyadan waxaa loo maleynayaa inay shaqeynayaan on y offline, isticmaalka la jeexay waa mid aan suurtagal ahayn, sida xaaladdu tahay Google Earth.
Heerka 3. Tani waa kiisaska codsiyada kaliya ee shaqeeya online, sida waa kiiska wikipedia.
Marka laga reebo tan, oo u muuqata aniga ii ah classic waa maqaal kale oo lagu magacaabo «Halkee GIS iyo aduunkuba waxay ku kulmaan»Xiiso ku saabsan xaqiiqada dalwaddii ee lagu dabaqay GIS… in kasta oo aan wax walba la rumaysan karin si wax ku ool ah.
Fritz Zobl iyo Robert Marschallinger dhalaala ka hadlaya Geo BIM, waqtigan maraya taabashada habka topoollada iyo injineernimada shaqada madaniga ah.
Sidoo kale dhinaca qaab-dhismeedka miyir-qabsi waxaa jira maqaal muujinaya isdhexgalka Qalabka fog-fog ee GIS, iyada oo loo marayo qaabka qiyaasaha ee fosfooraska ...
5 Cusbooneysiinta qalabka
Ku sii wadida baaritaanka qalabka kor ku xusan ee lixda daabacan, kiiskan waxaa jira dib-u-eegis ku saabsan saldhigga guud ee robotka Leica TPS 1200 +
Jena cusub oo ah Jena. Qodobkan waxaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah casriyeynta qalabka fiirinta dhulka.
Waxyaabaha cusub ee ay ku ciyaaraan Magellan waxay keenaan ... waa inaynu aragnay tan, maxaa yeelay Magellan waxay iibsanaysaa iibsashada joogtada ah, cidna ma yaqaanno cidda taageera oo sii wadata inay abuurto.
6. Waxaa jira ...
Waxaan kugula talin lahaa inaad ku akhrido internetka ama u soo qaado sida pdf ee ururintaada, kaliya miisaanka 12 MB oo aad u soo degso si degdeg ah.
Post Previous" Hore Google Earth ee wikia Uncyclopedia
Post Next Ugu danbeyntii dib u noqo, oo waan baxayaaNext »
4 Jawaabta "Geoinformatics, edition 7… GIS iyo wax badan oo Hispanics ah"
Miguel Angel Gomez isagu wuxuu leeyahay:
Caadi ahaan waxaan mar walba ku lug leeyahay sameynta sahan-tirin-tira-tiran si aad u fara badan oo qorshaha cadastimadoodaba. sidaa daraadeed waxaan xiiseynayaa inaan sii wado arrimaha ku saabsan shaqadayda.
un.org.ngo isagu wuxuu leeyahay:
Dhammaadka mashruuca Oktoobar ee 2012;
Qaramada Midoobay (NGO-ga Laanta - Qeybta Sawir-gacmeedka) waxay fulisaa dejinta saldhigga LEICA qiimaha gaarka ah ee € 1.000 (US $ 1.211);
Kharashka dhoofintu waa masuuliyadaada, waxay kuxirantahay iyadoo ku xiran waddanka iibka iyo la bixin karo kahor inta aan la dirin.
Saldhigyada tamarta dhedig ee Leica ee iibinta:
- 8 Leica TCRP 1205 R300 R300 1203 iyo TCRP
Email xiriirka: un.org.ngo@gmail.com
Qaramada Midoobay - Qolka S-1093
Waxay ila tahay aniga talaabo wanaagsan ... oo aan ahayn sida ay u sixi doonaan hadhow markay Google go'aansato inay dhexgasho sawirada saxsanaanta wanaagsan, horeyba ula jirtay dhammaan macluumaadka ay soo geliyeen dadka isticmaala
Aniga oo ka hadlaya Web 2 iyo GIS, shakhsiyan waxaan u malaynayaa in Google's Map Maker (aaladda khadka tooska ah loogu daro / loo abuuro xogta khariidadaha waddooyinka ee Google Maps) waa tusaalaha ugu awoodda badan. Ku dhowaad dhammaan Hindiya ayaa loo qaabeeyey sidan, iyada oo ay ku darsadeen kumanaan qof iyada oo loo marayo boggaas. Shaqo marka la xaqiijiyo lana saxo waxay u adeegi doontaa malaayiin dad ah muddo dheer. Xalka weyn ee wadamada soo koraya, halkaasoo siyaasiyiintu isku maaweeliyaan iyagoo arkaaya sida lacag badan loo helo halkii ay waxyaabo waxtar leh ugu kordhin lahaayeen bulshada iyaga quudisa ...